भ्रष्टाचारीले मात्र सुन्ने यो आकाशवाणी – Durbin Nepal News
असार १६, २०७७ १०:१७ मा प्रकाशित
कोरोना भाइरसको अन्त्य भएछ । महादेवजी दिक्क भएर पुन: यस्तो भाइरस पठाएछन् । नेपालमा जुन भाइरसले भ्रष्टाचारीलाई घाँटीमा अँठ्याए पछि स्वास बन्द गराएर मार्ने “भनेभा” भाइरस ।
सुटुक्क लुकेर हैन, ठूलो गर्जनका साथ आकाशवाणी पनि गरेछन् माहादेवजीले । “भनेभा” भाइरस नेपाल लगायत सम्पूर्ण भ्रष्टाचारले ज्वरो गाडेको देशमा फैलिने छ । १ महिनासम्म जो आफ्नो बेडरुमबाट कतै निस्कदैन त्यो मात्र बाँच्न सफल हुनेछ । र यो आकाशवाणी भ्रष्टाचारीले मात्र सुन्ने छन् ।
अहो ! बिचित्र त यो भयो की, महादेवले पृथ्वीमा आएर नेपालका नेताहरूको अवस्था र मृत्यु संख्या रिपोर्ट गर्ने जिम्मा मलाई दिए। नमान्ने कुरै भएन । महादेवले भनेपछि म पनि के कम ! आफूलाई नलाग्ने भाइरस, भ्रष्टाचार गर्नेलाई लाग्ने न हो । १ हप्ता पछि नेपाल पुगे रिपोर्ट लिन । पहिला त सिस्नु ढिँडो खान मन लागेर गाँउ गएका गन्य मान्य राजनीतिज्ञहरू कोही छैनन् । नाता गोतालाई सोधे कोहीलाई टनसील त कोहीलाई ज्वरो रे ! कोही ढाड दुखेर सुतेछन् । बेडरुममा मैले बुझिहाले । जिल्लातिर गए । शालीन र भलाद्‌मी नेता पनि पो गायब । अरु त छँदै थियो। अचम्म मान्दै सोधे ‘तपाई पनि ?’ “होइन नातागोतालाई जागिर ख्वाएको थिए । त्यो पनि गनिन्छ होला भनेर के !मन्त्री हुँदा लोब लाग्दो रैछ । १/२ ठाउँ दस्तखत गरेको घरमा खर्च ल्याइदिए । उत्तर आयो हिँडे त्यहाँबाट। मलाई नि भष्ट्राचार गर्न मन लाग्यो ।”
सोचे सबै जिल्ला गएर बुझ्न असम्भव छ । बरु काठमाडौँ गएर सबैतिर छानेर फोन गर्छु । मुख्य मुख्य नेतालाई । काठमाडौँ गए । १ जना बाहेक सबैका सबै नेता गायब । बेडरुममा फोन लिएर १ महिनाका लागि । शेरबहादुर देउवालाई फोन लगाए र परिचय दिए । अनि भट्भट्याउन थालिहाले । “शुरु देखी यो वाणी नसुनुन्जेल सम्मै गरियो । कान समाउँछु म सब फिर्ता गर्छु । लौन महादेवजीलाई भन्देऊ । तर जनतालाई थाहा नहोस् ।”
बाबुरामजी म बोल्दैछु परिचय के शुरु गरेको थिए रुन्चे स्वरमा “चुनाबका बेला हिसिलाजीले गर्दा क्या ? आफू नि सिद्धिने भइन मलाईनी?” अनि प्रम हुँदा नि सोधिहालेँ मैले ? “त्यो बेला नि यिनैले हिसाब किताब राख्थिन् राती यही बेडमा यो यो र यसो यसो गर्नु भन्थिन् यिनलाई सोध्नुस् ?”
तराईतिर फोन लगाए । एउटा नेता र कार्यकर्ता पनि छैन गाउमा हिजोआज । के पी ले सबैलाई सिध्याए कि क्या हो । जनता को गुनासो थियो । उपेन्द्र ज्यू आरामै म फलानो । “ए भाई यो मन्त्री हुदा लिन्न भन्दा नि दिएर ल्याउछ । उप तथा पराराष्ट्मा हुदा त के के गरियो हिसाब नै छैन । बरु, बस्छु बेडरुममा १ महिना हर्नियाको सर्जरी गरेको रैछ भन्दीनु जनतालाई ।”
अशोक राई ज्यु तपाई ? “जातिए आन्दोलनमा एक सुटकेश मात्रै हो । जिबन भरीको सुरक्षा कोष भनेर देको लिईहाँले । यस्तो भनेभा आउला भन्ने के थाहा र भाइ ?”
राजेन्द्र महतो सन्चै हुनुहुन्छ ? अस्ती त टुडीखेलमा झुन्डाउने आवाज चर्कै थियो त ? आफ्नो घर शिसाको हुनेले अर्काको घरको शिसा फोर्ने? जवाफ आयो नरम स्वरमा “उतैबाट भारु आइरहन्छ घरको सदस्यको नाममा । तेल मन्त्री हुदा नियुक्तीमा बढिनै खाइयो जस्तो लाग्छ, छुटफुट त हिसाब राखेकै छैन ।”
झलनाथ सर कता भनेको “माधबलाई प्रम बाट हटाएको अरु क्षेत्रमा खासै कमाउन नसकेर हो साला ‘भनेभा’ ले पो यो दशा लाग्यो त । नत्र मेरो बजार हल्ला खासै थिएन ।राम्रो सेटीङमा खाको थिए।”
गगन जी भनेको “जिब्रोमा खटिरा आयो भन्नुस त रे !” परिचय दिए मैले अनि युवा जवाफ आयो “राजनिती मा कोही कसैले पनि क्लिनली काम गर्न सक्दैन म पनि त त्यही समाजको सदस्य हु राजुजी बुझ्नुभो नि । हल्ला नगर्न आग्रह गर्छु ।”
चित्र बहादुर बा के भएर बेडमा नि? म बोलेको:- “मुलाहरु बहुमत पुगेन सरकारमा सामेल भैदे भनेर मर्न लागे पछी गको नखाई सुखै नपाएर लौ त होस भनेर बाध्यताले मात्र हो खाको । थोरै अनि १/२ भनसुन सांसद हुदै गराएको हो । आफु जनताको कम्युनिस्ट । ढाँट्ने कुरो छैन ।”
माकुने सर ? जवाफमा “हजुर के भन्नु र झक्कुले हराएपछी पैसा सदासर्बदा चाहिने रैछ भनेर एक नाथ सँग सम्झौता भको जगजाहेर नै छ । मेरो ठाउ-ठाउबाट माग्दै नमागी आउछ । बोरु बामदेबलाई गृहमन्त्री हुदा आईजीपी प्रकरणमा नखा भनेको थिए मैले । उन्ले खाएर छोड़े । अहिले यिनले नि चाल पाए । किन बामदेब को कुरो गर्या मैले तपाईलाई सोधे र ? “होइन यही छन मेरै अगाडी, हिजो आज यतै खाने यतै पाउना रुममा बस्छन ।”
प्रचन्ड कमरेड हराउनु भोत? “मेरो श्रीमती बिरामी छन । प्राय उन्कै रेखद्खमा समय बिताउछु । ए म फलानो बोलेको :- “हैट के हो यो ‘भनेभा’ ? कति बैंक लुटियो कति, क्यानटोनमेन्टमा पनि टन्नै कुम्ल्याईयो । कति मारीयो ।अब के भन्नु ? मैले तपाई आफैले बताउनु भो भने त १ दिन लाग्ला मने हिहिहि ।”
रामचन्द्र पुरेतको फोन पनि लागीहाल्यो :- “बल्ल बल्ल कोरोना बाट बचेको ‘भनेभा’ ले सखापै पार्यो । त्योत्रो कांग्रेस सरकारमा हुदा कती कमाईयो कति कस्ले हिसाब राख्छ र ? अब बाँचिन्न क्यारे लौन केही उपाए भए बताईदिनु । प्रकाशमान र सिटौलाहरु नि बेडरुमै होलान । के भन्दारैछन सुनाउनु ल साथी । रामशरण त यही छन लौ फोन रे !
“टोपी नेपाली दिमाग अमेरीकी देशलाई त पुजी जगेर्ना गर्नेले आफुलाई गर्दैन होला त भाई ? गरियो नि अर्थमन्त्री हुदा, भनेभा आउछ भन्ने के थाह र ?”
कमल थापा ज्यू के छ मैले सोधे, “को हो यो ?” ठाड ठाडो रिप्लाई आयो । परिचय छिटो नदेको भए फोन काटी हाल्ने रैछन । :- “म खान लाउन र गर्न जन्मेको त्यो निरन्तर बैधानिक या अबैधानिक जुनसुकै तरवरले गरिराको थिए सबै पार लाए तर ‘भनेभा’ सँग घुडा टेक्न बाध्य भए ।:
योगेश भट्टराई कता हिड्दै नि ? जवाफमा “बेडरुममा जान लागेको, भनसुन सनसुन बाहेक त्यस्तो केही गरेको थिईन, आफनै घरको भाडा खाको त हो भनेर यसो बाहिर निस्केको त घाँटी च्याप्प भयो अनि दौडेर आको रुममा ।”
सबै गायब छन कतिलाई सोध्नु त ! यि सबै प्रतिनिधि पात्र समेटी हाले भनेर भिम रावललाई चुस्स सोधेर प्रम ओलीमा टुग्याउने बिचारले फोन लगाए । रावल सर म फलानो:- “यता धेरै सजिलो पैसा कमाउन, सुदुर पश्चिमका जनता सोझा हल्ला नी नगर्ने भनेर नखाको भए मेरा बाआमाको अंशले यो अहोदामा पुग्न गार्हो नि भाई । धेरैले आफै दिए मैले नि धेरैलाई जागिर ख्वाईदिए । मन्त्रीहुदा अली पहिला मेरो बजार हल्ला पनि सुन्नु नै भा होला ।”
के पी बा तपाई त भ्रष्टाचार नि गर्दीन, गर्नेलाई नि छोड्दिन भन्नुहुथ्यो । देश चलाउने बेलामा किन बेडरुममा लुक्नुभाको नि ? :- “चुनाब मा यिनै बिनोद चौधरी, खेताङ फेताङले पैसा हालेको सत्य जगजाहेर छ, अहिले नगरेनी गर्नेलाई कारबाही गरौ भने । आफ्नो पक्षमा कोही नहुने, नगरौ भने “भनेभा” को शिकार हुनुभन्दा किड्नी फेरोको आराम गरेको भाईराजा ।”
रिपोर्ट बुझाउनु पर्यो भनेर डाटा इन्ट्री गर्न कोटेश्वरबाट जादै थिए । १ जना नेता खुलेआम बाल नदिई लियाम्फ्याङ लियाम्फ्याङ हिडीरह्को देखे ति थिए नारायण मान बिजुक्छे। ए नेता ज्यु कता हिडेको ? आकाशवाणी सुन्नु भएन ? “मैले त केही सुनेन बोरु जनताको काम भएनरे नेता जति सबै बिरामी भए मात्र भन्छ बालुबटार जान भक्तपुरबाट लोकल गाडीमा यहा आए अब यहाबाट नेपाल यातायात चढेर जान्छु भनेर नि ! प्रम लाई भेटीन्छ की तै ? अनि भाई को परिचय ?” मैले “म पनि सानो प्रोजेक्टको रिपोर्ट तयार गर्नु थियो त्यसर्थ कम्प्युटर इन्स्टिच्युट खोज्दै हिडेको हस्त नमस्ते “!
म झलल्याँस बिउझें । कहिल्यै नदेखेको अनौठो सपना १०३.९ फरेनहाइट ज्वरोमा ३२५ मिलिग्रामको ३ ओटा टाईनल खाएर सुतेको बेला देखेको यो सपना जस्ताको तस्कै पस्के । सपना माथी सकारात्मक नकारात्मक जस्तो प्रतिक्रिया गर्नुभए पनि आभारी हुने छु ।
-राजु चौलागाई सानफ्रान्सिस्को, अमेरिका
आजबाट सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा सुरु